कथाः सहिदकी आमा – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
कथाः सहिदकी आमा
२०७१ बैशाख २७, शनिबार ००:५८ गते
‘धिक्कार गरिबलाई त, मासेरै छाड्ने भो ! असार मासमा पनि केको जून लागेर बसेको हो ? रोपेको कोदो पनि सोरे भो अब । पोहोर साल पनि यस्तै भो, मेला जान पाइएन । पछि सामलको जोगो हुन नसक्दा सिस्नो खोज्न जानुपर्ने भो । यसपालि पनि त्यस्तै हुने भो ।’
ढाड कुप्रिएको, लफ्रक्कै भिजेकोे फरिया र रंग उडेको मजेत्रो ओढेकी जूनेली रछ्यानमा रोपेको कोदो हेर्दै आकाशतिर फर्किन् ।
‘दिउ“सो त ठूलै पानी पर्लाजस्तो थियो, अहिले त आकाशमा बादलको चिन्है छैन । टहटह जून पो लागेको छ ।’
‘आमै, अझै सुत्नु भएको छैन् ?’ नजिकैबाट चिनेको आवाज आयो ।
‘ए, मास्टर पो बोलेका रहेछन् । अ“ बाबु, राति पानी आउ“छ कि भनेर आकाशतिर हेर्न लागेको, बादलको त टुक्रै पो छैन । गरिबलाई मार्ने भो बाबु यसपालि ।’ जूनेलीले एकै सासमा बोली ।
‘अनि यो राति कता ? भोलि गैरीखेत रोप्ने भनेको होइन बाबु, त्यही भएर खेतमा पुगेर आको ?’
‘अ“ काकी, खेतमा पुगेँ । कुलामा पानी थोप्पै छैन । त्यही भएर काकीलाई भोलि मेलामा आउनुपर्दैन पनि भनौँ भनेर आको थिएँ । काकी त सुत्नुभो होला भनेको, अझै सुत्नुभएको रहेनछ ।’ मास्टरले मेलामा नआउन भन्यो ।
‘अब के गर्नु, पानी नै नभएपछि केको मेला आउनु र बाबु ?’ आ“गनको डिलमा उभिएकी जूनेलीले भनिन् ।
‘ए, काकीले त कोदो पनि रोपिसक्नु भएछ । एक्लो मान्छे, कति छिटो काम सकेर बसेको । कति
वर्Èको हुनुभो काकी ?’ उसले सासै नफेरी भन्यो ।
‘खेतबाट आएको होला, बस न बाबु नुनपानी पकाउँछु, खाएर जानू ।’ मास्टरले मुन्टो हल्लायो ।
‘प्रायः तिमी त हाम्रो घरमा छोरो बितेपछि आएकै छैनौ । खाली मास्टरनी आउँछे, त्यो पनि कहिलेकाहीँ । हिजो रवि नाति आको थियो, मेलामा आउनू रे हजुरआमा भन्थ्यो । छोरो त खूब असल रहेछ, तिमीजस्तै मीठो बोल्छ, जहिल्यै हजुरआमा भन्छ । त्यत्ति सानो छ, खूब विवेकी रहेछ । म कोदो रोप्दै थिएँ, अलिक बेर बस्यो । अलिकति बारी खनिदियो र अन्तिममा जाने बेलामा मेला आउन भन्यो । मैले त हार्नै सकिनँ ।’
‘मास्टरनी आउ“दा पनि त्यसै गर्थी । परिवारचाहिँ तिम्रो खूब राम्रो छ है बाबु । छोरो खूब मिजासको लाग्यो । पहिला–पहिला तिमी पनि त्यस्तै थियौ, काकीआमा भन्थ्यौ । के गर्नु बाबु, आफ्नो त कर्मै यस्तै रहेछ । उमेरमा पनि एक्लै भइयो । बुढेसकालमा त झन् एक्लो भइयो ।’
‘नुनपानी हो, समात ।’ कपमा चिया दि“दै जूनेली भन्न लागिन्, ‘के गर्नु, चिनीको भाउ पनि कति बढेको हाम्रो मास्टर गएपछि त !’ बूढीले चिनी ल्याइदिने मान्छे कोही
भएनन्, मनमनले भनेझैँ गरी टक्क बोल्न अडिन् । मास्टरले चिया समाते ।
घर धूवा“ले भरिएकाले मास्टरले माथि हे¥यो, ‘माथ्लो तलामा बुहारी बस्छिन काकी अनि भ¥याङ टालेको ?’
‘अ“ बाबु, छोरा बितेको केही वर्È त बुहारीस“ग मिलियो । ससुरा पनि बितेपछि त उसको सहारा कोही भएन । माइत गएर बसेकी थिई । पोहोर साल राज्यले सहिदहरुलाई पैसा दिने भएपछि आएकी थिइन् । म बूढी उनी भर्खरकी, कुरा मिल्ने कुरा भएन । अनि भिन्न भइन् बाबु । अहिले त फेरि माइतै गएर बसेकी छन् । असारमा पनि आइनन् । खेतबारी बा“झो राखिदिनु पनि भएन । त्यही भएर तल्लाघरे काइँलालाई खेत रोपिदिन भनेको छु बाबु । के गर्नु, एक हलको मेलो मात्रै भए पनि रोप्नैप¥यो ।’
मास्टरले जूनेलीलाई रोक्दै भन्यो, ‘आमा, अनि त्यो पैसा कसका नाममा राखेको छ ?’
‘जे भए पनि हरिकै अनुहारको त्यो अभागी आकाश छ । उमेर पुगेपछि त्यसैको नाममा निकाल्न पाउने गरी राखिदिएको छ बाबु । म आमा भए पनि अस्ताउ“दी घाम हु“, उमेरकी बुहारीको के भरोसा । पछि त्यो बिथला पर्ला भनेर नातिकै नाममा राखूँ भनिदिए“ बाबु ।’
‘हेडमास्टर आएका थिए, उनले पनि त्यसै भने । अध्यÔ बूढा पनि आएका थिए, बुहारीको नाममा पैसा राख्नुहुन्न, नातिकै नाममा राख्नुपर्छ भने । पार्टीका मान्छेहरुले चाहिँ पैसा बैंकमा राख्नुहुन्न, कुनै आयआर्जन हुने ठाउ“मा लगाउनुपर्छ भनेका थिए तर मन मानेन । छोरो नभए पनि छोरोजस्तै नाति छ । त्यसको मुख पनि हेरिदिनै प¥यो । मैले त मेरो सास नगइन्जेल यो खेतबारीको लालपुर्जासमेत बुहारीलाई नदिने निर्णय गरेको छु । सक्छे कमार खानुप¥यो, नसके के गर्नु ?’
मास्टरले चिया खाइसक्यो । ‘काकीआमा, भोलि मेलामा नआउनुस् है, म अहिले हिँडे ।’
मास्टर हिँड्यो । बूढीले ढोका लगाइन् र खाटे ओछ्यानमा लगाएको ओछ्यानमा गएर पल्टिन् । जस्केलामा बा“धेका बाख्राहरु बाहेक बूढीको साथी ठूलो पानासोनिक रेडियो थियो । कति बजो होला, बूढीले रेडियो खोलिन् । रेडियो नेपालले नौ बजेको समाचार भन्दै थियो । बत्ती निभाएर सुत्नुप¥यो भनेर बूढी स्वीच थिच्न उठिन् । स्वीचकै छेउमा पार्टीले बनाएर पठाएको छोराको सहिद क. हरि लेखिएको फोटो थियो । निधारमा रातो टीका, गलामा माला पहिरिएको, सेनाको कपडा लगाएर हातले लालसलाम गरेको ह“सिलो अनुहारलाई उनी जहिल्यै सुत्ने बेलामा हेरेर मात्रै सुत्थिन् । आज पनि फोटो हेरेर सुत्न आ“टेकी थिइन् ।
उनको हात अनायासै नजिकै रहेको रातो भेस्टमा गयो । भेस्ट समातेकी मात्र के थिइन्, आ“खाबाट आ“शुका थोपाहरु बग्न थालेछन् । मुजा परेका गालाबाट झरेका आ“शुका थोपाहरु मुखमा पर्न थाले । उनी भेस्ट लिएर ओछ्यानमा पुगिन् । उनलाई खोकिलामा भेस्ट हालेर सुत्न मन लाग्यो । उनलाई हरि ७ वर्Èको हु“दा बाले गान्टुकबाट ल्याएको रातो भेस्ट लाएर आफूस“ग सुत्न लागेको गोरो, चुच्चो नाक भएको, पातलो ज्यानको नया“ भेस्ट लाएर खुसीले सा“झमै सुतेको हरिको याद आयो । उनी कोल्टे फर्किन् ।
१० वर्Èअगाडि उही अघि भेट्न आएको हर्के मास्टर र छोरालाई भेट्न आएका पार्टीका मान्छेको याद आयो । झन्डै आफ्नै छोराका उमेरका ७ जना लोग्ने मान्छे र ४ वटी छोरीमान्छेहरु असारमा उनीहरुका घरमा आएका थिए । उनीहरुले दुई दिनसम्म खेत रोपिदिएका थिए र असार पन्ध्र गते बेलुका पूर्णिमाको दिनमा यस्तै टहटह जून लागिरहेको बेलामा गाउँलेहरुलाई भेला गराएर सांस्कृतिक कार्यक्रम गरेका थिए । सोही दिन बेलुका उनको हरि पनि तिनीहरुस“गै पार्टीमा हिँडेको थियो । दिनभरि कोदो रोपेर बेलुका कार्यक्रममा के–के गीत तिनीहरुले गाएका थिए, तर जूनेलीलाई मात्र यो गीत याद छ ः
‘यो शरीर ढल्यो साथी हो,
लाल झन्डा झुक्न नदिनू,
क्रान्तिकारीका लागि मरेर गयो
आमाले आ“शु बगाउनुहोला
पार्टीलाई मेरो यो कमिज दिनू
सहिद भो भन्दिनू ।’
जब छोरो तिनीहरुस“गै हिँड्यो, अनि जुनेलीले त्यो छोराले खेत
रोप्दा लाएको रातो भेस्ट धोएर राखेकी थिइन् ।
छोरो बीचबीचमा धेरै पटक घरमा आएको थियो । उनले पार्टीमा नजान, घरमै बस्न भनेकी हुन् । धेरै पटक उनी हरिस“ग रोएकी पनि थिइन् ।
‘बाबु यदि तिमीलाई केही भैहाल्यो भने बाबु बूढा भएका छन् । बुहारी भर्खरकी छ । छोरा १ वर्Èको मात्रै भो । तिमी नजिकै स्कुलमा मास्टर पनि भएका छौ, पार्टीमा नजाऊ’ भनेकी थिईन् बूढीले ।
‘तर आमा, म अहिलेसम्म तपाईंको मात्रै छोरो थिएँ, तपाईंले मलाई माया गर्नुहुन्छ । आजभोलि आमनेपालीको छोरो भएको छु । तपाईंका हिजोसम्म म र दिदीमात्रै छोराछोरी थियौँ, अब तपाईंका छोराछोरी धेरै भएका छन् । तपाईंले आ“शु नझार्नुहोला । देशका लागि
हिँडेको छोरो केही भैहाले पनि नरूनुस् आमा । म केही भैहालेँ भने पनि साथीहरुले सबै व्यवस्था मिलाउ“छन्, पीर नमान्नू’ भन्दै आफैँले आ“शु पुछिदिएर हिँडेको थियो ऊ ।
पार्टीका मान्छे जतिखेर आउ“दा पनि उनले आफ्नै छोरा सम्झेर पनि खाना खान दिने, राम्रो हेरचाह गर्ने गर्थिन् । गाउँलेले ‘तेरो छोरो मर्छ, यो बूढी आतंककारीकी आमा हो’ भन्दा पनि चुप लागेर सहेर बसेकी थिइन् । छोरो हिँडेपछि मात्रै हर्क मास्टरले हरिकै ठाउँमा गणित पढाउन पाएको थियो । हरि गाउँमा बसिन्जेल गाउँका बूढाबूढी जम्मा पारेर पढाउ“थ्यो । गाउँमा जा“डरक्सी नियन्त्रण भएको थियो । ऊ बेलुका–बेलुका गाउँका भुराभुरी जम्मा पारेर ट्युसन पढाउ“थ्यो । पढाउ“दा पढाउ“दै भुराभुरीले नाचगान गर्ने भन्दा आफैँ हारमोनियम निकालेर बजाउ“थ्यो । गाउँका सबैले हारमोनियम, मादल बजाउन हरिबाटै सिकेका थिए । हरि भनेपछि के बूढाबूढी, के केटाकेटी सबै मरिहत्ते गर्थे ।
हरि पार्टीमा हिँडेपछि हेडमास्टरले समेत आएर ‘गाउँ नै शून्य भयो’ भनेका थिए । गाविस अध्यÔ बूढाले आएर ‘हरि नभएको, दसैँ नै आएन’ भनेर प्रत्येक दसैँमा भन्ने गर्थे । दसैँ आउ“दा हरि १५ दिनदेखि नै सांस्कृतिक कार्यक्रमको तयारीमा हुन्थ्यो । केटाकेटीहरुले त पोहोरको दसैँमा समेत हरिदाइ नभएर दसैँ नै आएन आमा भनेर घरमा नै आएर भनेका थिए । ‘हरि गयो कि गाउँकै सह गयो आमा’ भनेर अस्ति मात्रै उसको केटाकेटीदेखिको साथी हर्क मास्टरले पनि भनेको थियो ।
०५९ सालको असार ११ गते बेलुका पनि यस्तै जून लागेको रात जूनेली रेडियो नेपाल सुनिरहेकी
थिइन् । नौ बजेको समाचारले नै हो, सिमबेँसी चौकी आक्रमण गर्न आएका आतंककारीहरुमध्ये ५ जना आतंककारीको घटनास्थलमै मृत्यु र दर्जनौँ घाइते, आक्रमण निस्तेज पारियो भन्ने समाचार भनेको । आमाको मन प्रत्येक घटना हु“दा आत्तिने गर्दथ्यो । यो घटनामा झन् बेसी आत्तियो । किनकि हरि त्यही Ôेत्रमा काम गर्ने गरेको खबर अलिक अगाडि मात्रै उनले थाहा पाएकी थिइन् ।
उनले राति सपनामा छोरो रगतले निथु्रक्कै भिजेर पानीपानी भनेको देखिन् । बिहान भालेको डाकमा उठ्ने उनले ‘आमा पानी’ भनेर छोरो रोएको देख्दै गर्दा तल्ला घरेको भालेको डाकले उनलाई उठाएको थियो । तत्कालै उनले ‘हरिका बा’ भनेर स“गै सुतेका श्रीमान्लाई बोलाएर सबै सपना सुनाएकी थिइन् । हरिको बाले उनलाई ‘हाम्रो छोरालाई केही हु“दैन । जनताका लागि हिँडेको छोरालाई ईश्वरले हात थाप्छन्, ढुक्क हो’ भनेर सम्झाएका थिए । नभन्दै तीन दिनपछि त्यही एरियामा काम गर्ने एरिया सेक्रेटरी निर्माण र त्यही आज आउने हर्क सर आएर लामो फेहरिस्त सुनाएर अन्तिममा ‘क. हरिले देश र जनताका लागि जीवन अर्पण गरी आफ्नो मरणलाई पहाडभन्दा गह्रौ, सगरमाथाभन्दा उच्च, सागरभन्दा निर्मल बनाएर गएका’ बताएर आफूलाई हरि सम्झन भने र हरिले पूरा गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्ने र उसको सपना साकार पार्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । जूनेलीको लामो रूवावासी तिनै प्रतिबद्धतामा आशाको दियो बालेर अड्किएको थियो । उनले अन्तमा क. निर्माणलाई ‘छोराले लिएको बाटो सफल पार्नू’ भनेकी थिइन् ।
जब उनीहरुले छोरो सहिद भएको समाचार सुने, त्यसै दिनबाट गणना हुनेगरी आफ्नो संस्कारअनुसार काजक्रिया गर्न थाले । रोगले सताएका हरिका बुबाले नाबालक नातिलाई क्रिया गर्न नलगाएर आफैँ काजक्रिया गरे । उनको रोग र शोकका कारण १३औँ पुण्यतिथिकै मितिमा उनको पनि देहावसान भयो, झन् जूनेली शोकमा परिन् । दोहोरो क्रिया गराई हु“दै गर्दा १ दिन क. निर्माण आएर क्रियाखर्च दिएर गएका थिए । त्यसपछि उनले निर्माणलाई अहिलेसम्म भेटेकी
छैनन् । उनी यतिबेला कहा“ छन्, कसैले पनि उनलाई बताएका छैनन् र उनले खोज्न पनि चाहेकी छैनन् ।
विगतका केही वर्Èहरुमा त पार्टीका साथीहरु नियमित उनको घरमा आएर भैपरी आउ“दा सहयोग गर्ने गर्थे । संकटकाल लागेको बेलामा पनि रातिराति उनीहरु आउने गर्थे, तर पछि पार्टी संविधानसभाको चुनावमा गएको थियो । संविधानसभाको चुनावमा पार्टीले उनलाई सहिद परिवारकी आमा भनेर खूब सम्मान ग¥यो । उनी धेरै कार्यक्रममा अतिथि पनि भएकी
थिइन् । उनलाई आफ्नो ६१ वर्Èीय उमेर पनि १६ वर्Èेजस्तै लागेको
थियो । टेक्नलाई लौरो टेकेर हिँडे पनि उनी सबैलाई उत्साह दिने
गर्थिन् । उनले बारम्बार आफ्नो हरि र सभासदको उम्मेदवार निर्माणलाई एकै मानेकी थिइन् । उनी भोट माग्दै भन्ने गर्थिन् ः
‘मेरो हरिको खबर लिएर आउने मेरो छोरो पनि यही निर्माण हो । यसले देशलाई नया“ बनाउँछ । देशमा शान्ति ल्याउँछ । अब कुनै हरिहरुले देशलाई रगत बगाउनुपर्दैन । अब हाम्रा दुःखका दिन गए बाबुहरु !’
उनले त्यसरी भोट मागेर जिताएको पनि २ वर्È बितेर यति आयो । तर, त्यसपछि निर्माण कहा“ छ, उनलाई थाहा छैन । अस्ति गाउ“को क्याम्पस उद्घाटन गर्न निर्माण आउ“छ भनेर उनी त्यहा“ गएकी
थिइन् । निर्माण आउन त कार्यक्रममा आयो, तर निर्माणस“ग उसको छोरो पार्टीमा हिँडेको छ । यो बूढीले पार्टीका मान्छे पाल्छे भनेर पुलिसलाई खबर दिने गाउ“को अध्यÔको छोरो प्रल्हाद घिमिरेस“ग पो आएको रहेछ । अगि–पछि कहिल्यै बाटो नकाट्ने निर्माण त्यसदिन त्यही प्रल्हादकोमा खाना खाएर कार्यक्रममा आएको थाहा पाएपछि बूढीले निर्माणलाई नभेट्ने निर्णय गरिन् र कार्यक्रम हेर्न गएको भए पनि बाख्रालाई घा“स काट्ने निउँले तल हरिले जागिर खाएपछि सर्वप्रथम किनेको खेतमा पुगेर आएकी थिइन् ।
उनलाई विगतमा हरिले गर्ने गरेका सबै कामहरु एकाएक सम्झनामा आउन थाले । हरिकै अनुहारको नाति आकाशको पनि याद आयो । अनि तिनै बूढा जो आफू १५ वर्Èकी हु“दा माइतबाट अन्माइएपछि ३८ वर्Èस“गै बस्दा भोगेका दुःख–सुखका सम्पूर्ण घटना सम्झिन् । उनलाई माइतमा आफू ७ वर्Èकी हु“दा यही असारकै बेलामा खेत रोप्दारोप्दै गोरूलाई खाजाका लागि घा“स काट्न जा“दा भीरबाट लडेर आमाको मृत्यु भएको दिनको पनि याद आयो । उनी यस्तै असारमा जून लागेको रात असार २९ गते जन्मिएकी थिइन् र उनकी मावली हजुरआमाले जूनेली नाम राखिदिएकी थिइन् । असारको बीचमा जून लाग्नु अशुभ हो, तर असार अन्तिममा जून लाग्नु शुभ हो भनेर उनको नाम जूनेली राखिएको कुरा हजुरआमाले बारम्बार भन्ने गरेको उनी सम्झन्छिन् ।
तर, उनी जन्मेदेखि कहिल्यै सुखी रहिनन् । आमाको मृत्युको दिनपछि सौतेनी आमाले गरेको व्यवहार र त्यसपछि सासूले दिएका सबै वर्तनहरु उनले सम्झिन् । उनको आशा त्यही छोरामा मात्रै अड्किएको थियो । उनले सधैँ असार लागेपछि अर्काको मेलामा दिएको खाजा पोल्टामा ल्याएर दिएको सम्झिन् । खरले छापेको घरमा ठूलो पानी पर्दा सुतेको बेलामा चुहिएको पानी छल्न र छोरो निद्राबाट नबिउँझोस् भनेर आफ्नै काखीभित्र माउ पोथीले चल्ला छोपेजसरी छोपेर राखेको सम्झिन् । अनि, छोरो मास्टर हु“दाको बन्दोबस्ती पनि सम्झिन् र पोहोर साल दसैँमा चामल नभएर जुवाइँ–छोरी टीका लगाउन आउँदा तिनै हर्केकी मास्टरनीबाट अÔता सापट ल्याउनु परेको सम्झिन् ।
पर्सिको दिनबाट उनको फुर्सद थिएन । पोहोर ज्वरोले गलाउ“दा सापटी लिएको ७ सय रूपैयाँ तिर्न पनि अध्यÔ बूढाकोमा मेला नै गइदिनु पर्ने थियो । नया“ वर्Èमा खसीको मासु पनि मेलामा आइदिने कबुलमा निकै खाएकी थिइन् ।
उनलाई रातको कति घडी बित्यो, पत्तै भएन । उनी ढुक्क भइन्; जतिसुकै बजोस्, पानी आको छैन, भोलि मेलामा जानु छैन । जेसुकै होस् भनेर कोल्टे फेरिन् । उनको सम्झनाको त्यान्द्रो लम्बिँदै थियो । धिक्कार ! यत्रो घर बनायो, राम्रो पढ्यो । गाउँको मास्टर थियो, सम्पत्ति जोडेकै थियो । बुहारी असल थिइन्, तर आज ती सबै छैन । म पापिनी बालखैमा आमा टोकेँ, उमेरमै छोरो र श्रीमान् टोकेँ । किन मलाई चाहिँ आउ“दैन पापी काल ? भनेर खोकिलामा च्यापेको भेस्टलाई हरि जन्मेको दिन जसरी उनले दुई हातले समातेर म्वाइँ खाएकी थिइन्, त्यसैगरी म्वाइँ खान खोज्दै थिइन् । त्यतिकैमा तल्ला घरे काइँलाको
भाले बास्यो ।
बूढी सहिदकी आमा जूनेली सधैँझैँ उठिन् र एक पटक सहिद हरिको फोटोलाई म्वाइँ खाइन् अनि भेस्ट सधैँको ठाउँमा झुन्ड्याएर चोखो पानी ल्याएर हरिलाई चढाउने निर्णय गरेर प“धेरातिर लागिन् ।